न्यायको खोजीमा मौलाएको अनशन संस्कृति | चितवन पोष्ट दैनिक
न्यायको खोजीमा मौलाएको अनशन संस्कृति
२०७० माघ ८, बुधबार ०३:५५ गते
देशमा संक्रमणकालीन अवस्था जतिजति लम्बिँदै गएको छ, त्यतित्यति देशको शासनव्यवस्थामा लापरबाहीका श्रृंखलाहरु दाहोरिँदै छन् । कार्यकारी निकाय मानिएको सरकार आफैँ चुनावी र कामचलाउको हैसियतमा सञ्चालित छ । देशका अन्य खबरदारी गर्ने नागरिक समूह, राजनीतिक दलहरु पनि आफैँ सीमित स्वार्थ र संक्रमणकालीन अन्यौलको चंगुलमा फसेका छन् । लामो समयसम्म देशमा संसद् नहुँदा देशमा जनताका यावत् समस्याहरु उठाउने निकायको अभाव छ । राजनीतिक दलका नेताहरु देश तथा जनताको समस्याभन्दा अन्तरपार्टी द्वन्द्व तथा पदको झगडामा रूमल्लिरहेका छन् । हरेक दिन दलका नेताहरुलाई नेताहरुको दैलोदैलो चहार्ने र सहमति गर्नेभन्दा बढी फुर्सद छैन । देशको मूल कानुन मानिएको संविधान नहुँदा र संसद् नहुँदा कतिपयलाई संक्रमणकाल कमाउने राम्रो अवसर बनेको छ । सबै ठाउँमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र ध्यान पुग्न सक्दैन । फेरि देशका कुनै पनि संवैधानिक निकायहरु राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बन्न सकेको देखिँदैन । देशमा रहेका नियम, कानुनको व्याख्याता मानिएको सर्वाेच्च अदालतका प्रमुख आफैँ सरकारको प्रमुखका रुपमा विराजमान छन् । देशमा जननिर्वाचित सरकार गठन हुने विषय अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने नयाँ सरकार बन्दैमा देशका यावत् समस्याहरु कुनै मन्त्र गरेजस्तो स्वतः समाधान भइहाल्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यस्तो अवस्था र अन्यौलका बीच देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता बढ्दै गएका छन् भने जनताको सेवा तथा हितका विषयहरु गौण बन्न पुगेका छन् । यस्तै अवस्थाका बीचमा पछिल्लो समयमा आमसर्वसाधारण नागरिकहरुले न्यायका लागि कि त तोडफोड र अराजकतामा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको छ भने, कि त आमरण अनशनमै बसेर न्यायका लागि ज्यान नै गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् । यसका पछिल्ला उदाहरणहरुमा हामीले राष्ट्रिय रुपमा निकै चर्चा पाएका नन्दप्रसाद अधिकारी र शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीलाई नै लिन सक्छौँ ।
गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी र उनकी श्रीमतीले छोराका हत्यारालाई कारबाहीको माग गरेर पटकपटक आमरण अनशन बसिरहेका छन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसक्दा अधिकारी दम्पती न्यायको पर्खाइमा छन् भने अन्य कयौँ पीडितहरुले आजसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । हत्याका आरोपीहरुलाई सरकारले पक्रिएको नाटक गरेर तत्काल पटकपटक छाडेको थियो भने उनीहरुलाई उल्टै तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले लगनखेलको मानसिक अस्पताल पठाएको थियो । माओवादीकै दबाबमा राज्य संयन्त्र यस विषयमा मौन छ । अधिकारी दम्पती त एउटा उदाहरण मात्र हुन्, उनीजस्ता कयौँ द्वन्द्वपीडितहरु अझै न्यायको खोजीमा भौँतारिरहेका छन् । उनीहरुको सवाललाई न त हिजोको युद्धरत समूह एमाओवादीले सरकारमा रहँदा सम्बोधन गर्न सक्यो, न त सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुले नै उचित सम्बोधन गर्न सकेका छन् । बृहत् शान्ति सम्झौताको झन्डै एक दशक बित्न लागिसक्दा पनि देशमा शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बन्न सकेका छैनन् । हतियार व्यवस्थापनलाई मात्र ठूलो उपलब्धि मानेर शान्ति स्थापनाका आधारभूत पक्षहरुलाई सबैले बिर्सिंदै गएका छन् ।
अधिकारी दम्पतीको अनशन वीर अस्पतालमा चलिरहँदा टिचिङ अस्पतालमा भने डा. गोविन्द केसी विगत १० दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन् । उनको यो पहिलो अनशन भने होइन, यसअघि उनले गत वर्ष भदौमा सुरूमा पाँच दिन र पछि पाँच दिन अनशन बसेका थिए । तत्कालीन समयमा उनकै अनशनका कारण उनको मागबमोजिम डा. प्रकाश सायमीलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले चिकित्साशास्त्रको डिनमा नियुक्त गरेको थियो । तर, उनले राजनीतिक हस्तक्षेप र अनावश्यक दबाबका कारणले काम गर्न नसकी राजीनामा दिन बाध्य भए । प्रकाश सायमी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानभित्र राम्रो छवि भएका र वरिष्ठ डाक्टर थिए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सायमीको राजीनामालाई तत्काल सदर गरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको वरीयता क्रममा २४औँ स्थानमा पर्ने तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी छानबिनमा समेत पारेको डा. शशि शर्मालाई नयाँ डिनमा नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्ति नयाँ मेडिकल कलेजहरुलाई अनावश्यक सम्बन्धन दिने र शैक्षिक माफियाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आएको ग्रान्ड डिजाइन नै थियो । संस्थानभित्र भएको यस्तो माफियाहरुको चलखेल र सीधै राजनीतिक हस्तक्षेपलाई टुलुटुलु हेरेर बसिराख्न नसकेपछि पत्रकार सम्मेलन गरी डा. गोविन्द केसीले अनशनको प्रारम्भ गरेका हुन् । उनले एउटा सानो निकायभित्रको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको मागलाई उठाएर आमरण अनशनमा बसेका भए पनि उनले उठाएका सबै मागहरु सम्पूर्ण नेपाली जनताले भोग्नु परेका समस्याहरु हुन् । राजनीतिक हस्तक्षेपका नाममा कसरी देशको सारा स्वास्थ्य धराशायी बन्दैछ भन्ने राम्रो उदाहरण नयाँ डिनको नियुक्ति प्रक्रियाले पुष्टि गर्दछ ।
आज देशका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गरिब र विपन्न वर्गको पहुँच कम हुँदै गएको छ । जति मेडिकल कलेजहरु स्थापना भए पनि जनता आजसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् । डाक्टरहरु अनियमित तवरले टन्न पैसा कमाएर सुकिलो भएर महँगो गाडीमा सवार रहने, तर नेपाली जनताहरु भने टाउको दुख्दा सिटामोलसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अस्पतालहरुको महँगो शुल्क तथा औषधिहरुको मूल्य गरिब नेपालीहरुले थेग्न नसक्ने अवस्था छ । अझ सरकारी अनुदानमा चलेका सरकारी अस्पतालहरुको हालत हेर्ने हो भने त झन् जताततै दुर्गन्ध र फोहोर मात्र देखिन्छ । अस्पतालहरुको शौचालयमा कुनै निरोगी मानिस हत्तपत्त जान सक्दैन । भनेको समयमा सरकारी अस्पतालमा डाक्टर भेटिँदैन भने उपचार प्रक्रिया पनि निकै ढिला हुन्छ । बिरामी अस्पताल धाउँदाधाउँदा वाक्क भएर प्राइभेट क्लिनिक जान बाध्य बन्दछ ।
सरकारले डाक्टरहरुको उत्पादनमा जति लगानी गरेको छ, तर प्रतिफल भने सोचेअनुसार पाउन सकेको छैन । सरकारी अनुदानमा पढेका डाक्टरहरु एकातिर देशमा नबस्ने अवस्था छ भने अर्काेतिर भएका जति सारा मेडिकल कलेजहरु काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित छन् । सरकारी लगानीमा काठमाडौँबाहिर मेडिकल कलेजहरु स्थापना हुन सकेका छैनन् । नेपालको जनसंख्याको वितरणलाई हेर्ने हो भने सहरको दाँजोमा गाउँको जनसंख्या पाँच गुना बढी छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति भने सबै काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित छ । सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले सधैँ विकेन्द्रीकरण, समावेशी तथा लोकतन्त्रको कुरा गरेर थाक्दैनन्, तर जनताको अत्यावश्यकीय संवेदनशील सेवा भने समानुपातिक रुपमा देशभर वितरण हुन सकेको छैन । देशबाहिर खुलेका निजी मेडिकल कलेजहरुमा पनि लापरबाही बढ्दै गएको छ । कतिपय कलेजहरुमा त नक्कली डाक्टरहरुको बिगबिगी बढेका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन् । गत वर्षमात्र विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेजले ३० भन्दा बढी नक्कली चिकित्सक भारतबाट झिकाएको समाचार आएको थियो । कतिपय निजी मेडिकल कलेजहरु त मानिसहरुलाई पैसा कमाउन खोलिएको चियापसलजस्तो बनिरहेका छन् । मानिसले लाखौँ खर्च ग¥यो भने जोकोहीले डाक्टर पढ्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । एउटा खराब तथा कमजोर ज्ञान भएको डाक्टर उत्पादन गरेर बिरामीको सेवामा खटाउनु भनेको जनतालाई सीधै विष खुवाउनुजस्तै हो । तर, यस विषयमा न त सरकार नै गम्भीर बन्न सकेको छ, न त त्रिवि परिषद् नै गम्भीर छ । यस्तै समस्याहरुको प्रतिफल नै देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लापरबाही बढिरहेको छ । घाँटीको अपरेसन गनुपर्नेमा पाठेघरको अपरेसन गरिएका जस्ता समाचारहरु समय–समयमा प्रकाशित भइरहेका छन् । त्रिविलगायत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानजस्ता निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डाले प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ ।
यस्ता यावत् समस्याहरुले थिचिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरुको समाधानका लागि डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहका रुपमा आमरण अनशनको प्रारम्भ गरेका हुन् । सत्याग्रह भनेको सत्य कुराका लागि गरिने आग्रह हो, जुन न्यायको खोजीका लागि सत्ताधारीका विरूद्ध माग राखेर पूरा गराउन शान्तिपूर्ण अड्डी लिने काम हो । डा. गोविन्द केसी देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कसिंगरहरु बढार्न भारतका अन्ना हजारेले जस्तो पटकपटक शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशन बसिरहेका छन् । अनशन बस्ने त उनी एक्लै हु्न्, तर उनको यो अभियानले समग्र देशवासीहरुको समर्थन पाइरहेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरभरि उनको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको छ । गत वर्ष उनको अनशनप्रति खासै चासो नदेखाएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत फेसबुकमा केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् भने अनशनस्थलमा गएर उनलाई प्रत्यक्ष भेटिसकेका छन् । यसरी सबैको समर्थन र सहयोग पाउनुमा डा. गोविन्द केसीको लोभलाग्दो जीवनशैली तथा व्यक्तित्वको कारणले पनि हो । जीवनभर अविवाहित बसेर उनले आफ्नो सारा जीवन देश–विदेशका सारा गरिब तथा दुःख पाएका मानिसहरुको सेवामा समर्पण गरिरहेका छन् । अनशन बस्नुमा न त कुनै पद र आर्थिक लाभको लोभ देखिन्छ, न त उनलाई मिडियामा चर्चा पाउने रहर नै छ । उनले गरेका हरेक अनुकरणीय कार्यहरुलाई त नेपाललगायत सारा विश्वले मूल्यांकन गरिरहेको छ । उनले नेपालका विकट गाउँहरुदेखि हाइटी, फिलिपिन्सको आँधी तथा भूकम्पले पीडित मानिसहरुसम्म गएर दैनिक बीस घन्टासम्म उपचारमा सेवा पु¥याएका छन् । अहिले देशका सबै क्षेत्रमा नैतिकताको अभाव देखिँदै गएको अवस्थामा डा. केसीले सारा देशका मानिसहरुलाई कर्मभाव र नैतिकताको पाठ सिकाइरहेका छन् । उनको यस पटकको अनशनले नेपाली समाजको चेतना तथा सोचको स्तरलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका मनपरीहरु सबैको माझमा छर्लंगसमेत भएका छन् ।
अहिले खिलराज सरकारका सामु कुर्सी छाड्नै लागेको पूर्वसन्ध्यामा डा. केसीको जीवनरक्षा गनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । सरकारले सकभर आलटाल गरेर नै यो समस्यालाई अधिकारी दम्पतीको अनशनलाई जस्तै समस्या समाधान गरिएको नाटक गर्न खोज्दैछ । यस्ता समस्याहरु किन आउँछन् र कसरी दीर्घकालीन समाधानका उपायहरु पहिल्याउने भन्ने सवालतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन । डा. केसी वा अधिकारी दम्पतीले जस्तै न्याय तथा सुशासनका पक्षमा मानिसहरुले अनशन बसेर ज्यान नै गुमाउन थाले भने त्यसले देशमा गम्भीर समस्याहरु निम्त्याउने छ, जसले देशमा लोकतन्त्र तथा सुशासनको अभियन्ता ठान्नेहरुलाई समेत गिज्याउने देखिन्छ । जतिजति डा. गोविन्द केसीको अनशन लम्बिँदै छ, त्यतित्यति त्रिवि कार्यकारी परिषद् तथा नवनियुक्त डिनको प्रतिष्ठामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागिरहेको छ । यस विषयमा नवनियुक्त डिन यदि थोरैमात्र मानवीय संवेदना तथा नैतिकता भएका मानिस हुन् भने तत्काल राजीनामा दिनु नै राम्रो हुन्छ । सरकार तथा राजनीतिक दलहरुले पनि यस प्रकारले समाजका हरक्षेत्रमा भएका अनैतिक क्रियाकलापहरु बन्द गर्नेतर्फ आजैदेखि प्रतिज्ञा गर्नुपर्दछ । देशमा शासनसत्ता र शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुने संस्कारलाई अन्त्य गर्दे हरेक सरकारी निकायका गतिविधिहरुलाई पारदर्शी बनाइनु पर्दछ, जब कि देशमा नन्दप्रसाद अधिकारी तथा गोविन्द केसीहरुजस्ता नेपालीहरुले फेरि पनि आमरण अनशन बस्न नपरोस् । आमरण अनशन भनेको मानिसले न्याय तथा अधिकारको खोजीमा अपनाउने सम्पूर्ण विकल्पहरु बन्द भएपछि अपनाउने अन्तिम विकल्प हो, जसमा मानिसहरु मृत्युसम्म रोज्न बाध्य बन्दछन् । यसरी सर्वसाधारण मानिसहरुलाई न्याय तथा अधिकारका लागि मृत्यु रोज्न बाध्य बनाइनु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा नैतिकताको घाँटी निमोठ्नु बराबर नै हो ।